दसैं आयो पर्देसी आएन : यो दशैंमा फेरी रुवाउने भयो यो गितले भिडियो – Complete Nepali News Portal
दसैं आयो पर्देसी आएन : यो दशैंमा फेरी रुवाउने भयो यो गितले भिडियो
September 12, 2017	273 Views
रुपेश बि.सि. बागलुङ जिल्लाको जैमनी नगर पालिका ३ सर्सुङ्ग खोरिया भन्ने ठाँउमा बाबा टेक बहादुर बि.क. र आमा मनमाया बि.क.को माइलो छोरा भएर जन्मनु भएको हो।
सनै देखि अनुशासित मिलनसार अनि राम्रो काम र नाम को लागी काम गर्ने ब्यक्ती थिए ।
गीत संगीतमा एकदमै रुचि राख्ने र गीतहरु गुनगुनाउने गाउने शब्दहरु कोर्ने गर्नु हुन्थो रे आज विविधता कारण बस पर्देशमा रहेर पनि अझै गीत संगीतलाई बिर्सनु भएको छैन। रुपेश भन्नू हुन्छ गीत संगीत बाटै आफ्नो नाम चिनाउने आफ्नो कला प्रतिभा अमर राख्ने आसा अपेक्षा छ।
यति बेला नेपाल मा रुपेश को आफ्नै काका दुर्गा बिरही जसलाई बहुप्रतिभा को धनी भनेर चिनिन्छ । बिरही छोटो समयमा धेरै चर्चामा कमाउन सफल छोटो समयमा निकै माथी पुग्नु हुने बहु प्रतिभा भएको ब्यक्ती हुनुहुन्छ । बिरही आफै लय शब्द गायन अभिनय र आत्मा बिस्वास फिल्मस् प्रा.लि. को निर्देशक पनि हुनुहुन्छ । बिरहिले छोटोे समयमा धेरै कामहरु गर्नु भएको छ ।
बिरही प्रोग्राम स्तेजमा पुगे भने दर्सकहरु मान्छेहरुको भिड अनि मान्छे माथी मान्छे चडेर नाचेको पाइन्छ । बिरही को गीत संगीत छेत्रमा छुट्टै पहिचान बोकेको छ । बिरही ले आफ्नै भतिजा रुपेश बि.सि. लाई पहिलो गीत भिडियो बाट नै साथ दिदै हुनुहुन्छ । रुपेश पनि यहि चाहनु हुन्छ बिरही काका को साथले दुर्गा बिरही भन्दा नि अझै नामि हुन सकु ।
बिरही पनि यहि भन्नू हुन्छ कि मेरो नाम काम जति चल्नु चल्यो अब पालो रुपेश को तेसको लागी दुर्गा बिरहिको सपोर्ट सदैब रहने छ भन्नू हुन्छ ।
आयो दसै प्रदेशी आएन..
स्वर : दुर्गा बिरही दान माया पुन
लय/शब्द : दुर्गा बिरही
थेगो : रुपेश बि.सि.
एरेन्जर: रमेश सेन्चुरी
रेकर्डिङ : स्थायी डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो
अभिनय : दुर्गा बिरही रिना शाही
छायांकन : बाशु बराल
शृङ्गार : बिमला तामाङ
निर्देशक : दुर्गा बिरही
अदियो : DS मिडिया
उत्पादक बितरक : आत्मा बिस्वास फिल्मस् प्रा.ली ,
तिम्रो सेतो गालाको मोइ खाउला (भिडियो हेर्नुहोस्)
किन पुजा गर्नुपर्छ सरस्वतीको ?सरस्वती पुजाको रहस्य, यसरी गर्नुस पुजा (भिडियो)
नारि जातीको यो कस्तो बिडम्बना ! न चाहदा चाहदै पनि हाँसी-हाँसी यो जिन्दगी काट्नु पर्छ तिम्ले भिडियो